नेपाल आज | ‘म पनि जनता हो, मेरी छोरी ओढारमै वस्नु पर्ने हो ?’ भनेपछि मन्त्री भाईरल
माओवादी केन्द्रबाट शिक्षा मन्त्री वनेका देवेन्द्र पौडेल यतिवेला समाजिक सञ्जालमा चर्चामा चर्चामा छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशका क्रममा उनले वोलेका कुरालाई लिएर उनको भिडियो युट्युव तथा टिकटकमा भाईरल भईरहेको छ।
शिक्षामा आमुल परिवर्तन गर्ने भनेर जंगल पसेको माओवादी शान्तिपुर्ण राजनीतिमा आएपछि नेता केन्द्रित भएको, नेताका छोराछोरी विदेशमा पढिरहेको, नेपालमा पढिरहेका पनि मासिक ५० हजार शुल्क तिरेर आधुनिक र सुविधा सम्पन्न विद्यालयमा भर्ना भएको तर जनताका छोराछोरीको अवस्था अहिले पनि जस्तो तस्तै रहेको भनेर प्रत्रकारहरुले राखेको जिज्ञासाका क्रममा मन्त्री पौडेल आवेशमा आएर विवादास्पद कुरा गरेपछि उनी चर्चामा छन् ।
‘तपाईहरुले राजनीतिक प्रतिवेदनमा के–के कुराहरु प्रस्तुत गर्नु भयो’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले भनेका छन्–‘जनतामा जाने, श्रमसित जोडिने, उत्पादनसँग जोडिने, पारदर्शी हुने, आफनो सम्पत्ति चै कस्तो अवस्थामा छ ? पार्टी पंक्तिमा जानकारी दिने यस्तै प्रकृतिका कुराहरु हामीले गरेका छौं ।’
त्यसपछि पत्रकारले उनलाई भुमिका सहित अलि लामो प्रश्न सोधेका छन्–‘यो वुर्जुवा शिक्षा काम छैन, अव क्रान्तिमा लाग्नु पर्छ भनेर ९/१० कक्षा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरुलाई वन्दुक वोकाउनु भयो मन्त्री ज्यू, आजको दिनमा तपाईहरुले आफना छोराछोरीलाई अमेरिकामा शिक्षा दिन लैजाने, एउटा गरिव देशको मन्त्रीले अमेरिकामा छोरी पढाउने, एउटा गरिव देशको पार्टीको अध्यक्ष ज्युले चै नातीलाई ५० हजार मासिक शुल्क वुझाएर पढाउने, प्राईभेट विद्यालयमा पढाउने । अव के सुधार गर्नु हुन्छ, अव तपाईहरु सुध्रिएर जान तयार हुनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा पहिला त उनले आफनो छोरी काम गर्नका लागि अमेरिका गएको र कुनै युनिभर्सिटीमा भर्ना नभएको भन्दै ढाँटे।
उनले भने–‘हामी सुध्रिएर जान्छौं। तपाईको प्रश्न मसँग पनि इगित होला। मेरो छोरीले चितवन पढेकी हो, गएर वुझन सक्नुहुन्छ। काठमाण्डौंमा पढेकी हो। काठमाण्डौ युनिभर्सिटीमा पढ्दा सक्षम भएर मजदुरी/जागिर खानलाई अमेरिका गएकी हो। कुनै पनि अमेरिकाको युनिभर्सिटीमा अहिले पढ्दै छैन। ५/६ वर्ष भयो गएको। विदामा आएको वेलामा मैले उनलाई हिजो चै काममा जानको निम्ती उनलाई पठाएको हो।’
‘एक वर्षअघि तपाई अमेरिका गएको र छोरीले डिग्रि गरेको फोटो तपाईले फेसवुकमा राख्नु भएको छ।’ भन्दै पत्रकारले थप प्रश्न गरेपछि भने उनले आफनो छोरी क्षमता प्रस्तुत गरेर अमेरिका गएको स्विकारेका छन् । पत्रकारको प्रश्नले आक्रोशित भएका मन्त्री पौडेलले भनेका छन्–‘हाम्रा छोराछोरी जंगलमै वस्ने भन्ने छ र?, माओवादी पार्टी नेताका छोराछोरीहरु गाउँमै, ओढारमै, जंगलमै वसिरहने भन्ने हुन्छ जनयुद्ध लडेको कारणले ? मेरो छोरी जनयुद्धमा हिड्ने वेलामा दुई वर्षकी थिई। म वन्दुक वोकाउन सक्थे ? दुई वर्षकी थिई, छोडेर हामी दुईटै वुढावुढी चै जनयुद्धमा हिडेको हो ।’
तर, जनताका छोराछोरीको त उस्तै छ त अवस्था ? भन्ने प्रनमा उनले आफु पनि जनता नै भएको भन्दै गैर जिम्मेवार उत्तर दिएका छन् । उनले उल्टै पत्रकारलाई प्रश्न गरेका छन्– ‘म जनता होईन, छोरी जनता होईन ? जनताकै छोराछोरी त हौला नी म ?’ यति भनिसकेपछि उनले प्रश्न अलिकता चै विषय वुझेर गर्दा राम्रो हुन्छ भन्दै सुझाव दिएका छन् ।
प्रश्न पुर्वाग्रही छैन कमरेड, तपाईहरुलाई म स्पष्ट पार्न सक्छु की आज एउटा गरिव जनताको छोराछोरी डाक्टर वन्न सक्छन् ? इन्जिनियर वन्न सक्छन् ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्–‘तपाईले पार्टीको सोध्न खोज्नु भएको होकी छोराछोरीको सोध्न खोज्नु भको हो ? मेरो एउटा छोरी छ, खुल्ला छ, उल्ले नाम निकाली, कुनै राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग/परिचालन गरेर कुनै मन्त्रीको पावर लगाएर मैले कही पठाएको होईन। उल्ले दुई ठाउँमा आफै कम्पिटिसन गरेर नाम निकाली। उल्ले चै इण्डियाको वैंलोर युनिभर्सिटीमा नि निकाली, अमेरिकाको युनिभर्सिटीमा निकाली। फ्रि कम्पिटिसनमा आफनो क्षमता प्रयोग गरी। के भाको हो ? राम्रो विद्यार्थी भएकाले चै उलले दुई ठाउँमा निकाली। तपाई वुझ्न सक्नु हुन्छ।’
मन्त्री पौडेलले पार्टीले वन्दुक वोकेकोमा गर्व लाग्ने वताए । उनले ‘हामीले वन्दुक वोकेकै कारण पत्रकारहरुले प्रश्न सोध्न पाएको र अधिकारका कुरा गर्न सक्ने भएको भन्दै दागा धरे। ‘म आफै पनि पढ्दा–पढ्दै छोडेर हिडेको। हामीले लिएर हिड्दाखेरी युवाहरुले यत्रो लोकतन्त्र ल्याए। परिवर्तन ल्याए’ उनले थपे–‘त्यसैले तपाईले अधिकारको कुरा गर्नु भएको छ, मलाई सोध्न सक्ने हुनु भएको छ। अरु कतिपयलाई प्रश्न सोध्ने हुन भयो।’
‘शिक्षामा आमुल परिवर्तन गर्ने, जनताका छोराछोरी पनि डाक्टर वन्न सक्ने, इन्जिनियर बन्न सक्ने, पाइलट वन्न सक्ने भनेर त्यत्रो जनयुद्ध गर्नु भयो। तेती धेरै जनताका छोराछोरीलाई वन्दुक वोकाउनु भयो। आखिर आज कुन चै गरिवको छोराछोरी डाक्टर पढ्न सक्ने स्थिती छ, कुन चै गरिवको छोराछोरी इन्जिनियर वन्न सक्ने अवस्था छ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्–‘तपाईले किर्तिपुरमा गएर हेर्नु भयो भने जनताकै छोराछोरीले पढेका छन् । तपाईले विदेशमा हेर्नु भयो भने ५० लाख नेपाली विदेशमा छन् । तपाईले आदर्शको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन। हामी पनि कोठा रेन्टमा लिएर स्टोभ वालेर काठमाण्डौ पढेको हो । त्यस कारणले जनताका छोराछोरी भन्दा फरक भए, जनतालाई विर्से, सवैलाई चै/५० लाख नेपालीलाई माओवादीले विदेशमा पठायो जस्तो गरी तपाईको प्रश्नै पुर्वाग्रही छ।’